Onye ndezi Vecteezy: A Free SVG Editor Online | Martech Zone
Onye nchịkọta akụkọ Vecteezy: A Free SVG Editor Online
Fraịdee, June 23, 2017 Fraịdee, June 23, 2017 Douglas Karr
Ihe nchọgharị ọgbara ọhụrụ na - arụ ọrụ dị ukwuu na - akwado scalable vector ndịna usoro (SVG). Ọ bụrụ na ị na-eche ihe gobbledygook pụtara, lee nkọwa ngwa ngwa. Ka anyị kwuo na ị nwere mpempe akwụkwọ eserese ma ịchọrọ ịdọrọ mmanya na ibe ahụ, jupụta na 10 n'ámá. You na - ejupụta na square ọ bụla n’adabereghị na ihe mmado nwere oghere ma na - edekọ aha nhazi nke x na y iji cheta ndị nke ị mejupụtara. ha nwere ike ịmeghachi usoro ahụ.
Dị ka ihe ọzọ, ị na-egbutu mpempe akwụkwọ mmado nke ya na 10 square baa n'ogologo, tinye ya na square mbụ, wee hazie ya ma tinye ndị ọzọ na mpempe akwụkwọ ahụ. Nke ahụ ga-abụ vector. Mara ọkwa mbido, ntụzịaka, na ogologo akwụkwọ mmado ahụ, ị ​​ga-ebufe ya ihe ọmụma ahụ n’aka onye na-esote ya, ha nwekwara ike megharịa ya.
You pụrụ ịhụ otú nke a si abịa kemfe. Y’oburu n’acho ichota onyogho nke mmadu, atumatu rastor gha aru oru nke uku n’ihi na ichoro ima agba na ebe piksel ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịse katuunu, ị nwere ike ịnwe mkpokọta vector ị nwere ike ịkpọkọta. Y’oburu n’acho iweghachite rastor ukwu, i nwere nsogbu. Ihe onyonyo mepụtara nwere ike ịdị ka nzuzu. Mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazigharị vector ahụ karịa, ọ bụ naanị mgbakọ na mwepụ ka ị gbakọọ nhazi - enweghị mgbagha.
Faịlị rasta ndị ọzọ bụ bmp, gif, jpg / jpeg, na png. Common vector faịlụ bụ svg. Emere nyiwe dịka Adobe Photoshop iji wuo faịlụ raster mana ọ nwere ike ịnwe ihe eji egwu egwu. Adobe Illustrator wuru ya maka faịlụ vector ma nwee ike inwe ihe raster agbakwunyere. Ha abụọ nwere ike ịpụta na faịlụ dị ka tiff na eps nke nwekwara ike ịnwe nchikota nke ihe.
N'ihi nke a, a na-echekwa ọtụtụ ihe atụ na akara ngosi na a ngwa usoro.
Gịnị bụ SVG usoro?
Scalable Vector Graphics (SVG) bu ihe onyonyo onyonyo nke XML dabere na eserese uzo abuo nwere nkwado maka mmekorita na mmeghari. Nkọwa SVG bụ ọkọlọtọ mepere emepe nke World Wide Web Consortium (W3C) mepụtara kemgbe 1999. A kọwara ihe onyonyo SVG na omume ha na faịlụ ederede XML.
N'ihi na ha bụ XML, enwere ike ịchọgharị SVGs, depụta ya, de ya ede, ma pịa ya. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ngwugwu ọ bụla ihe atụ nke vector, ị nwere ike iwepụta faịlụ SVG.
Vecteezy: Onye Nchịkwa SVG Ntanetị, Online
Vecteezy ewuola a free, online SVG nchịkọta akụkọ nke ahụ siri nnọọ ike! Ọ na-etu ọnụ interface interface nke dị mfe maka ndị mbido ma dị ike maka ndị ọkachamara. Atụmatụ gụnyere mkpirisi keyboard, mgbanwe dị elu na ndị ọzọ. Maka na etinyere ya na saịtị, enweghị sọftụwia ibudata ma ọ bụ wụnye. I nwekwara ike wepụta ngwa ngwa gị dị ka faịlụ png.
Tags: aiBMPEPSonye ihe ngosijpegjpgPhotoshopEepsIkesvgtiffngwa
Ọ bụrụ na ndị otu ọdịnaya gị mere nke a, ị ga - emeri